Apple Inopokana naTrump's Order Kubvisa Kudzivirirwa kweTransgender Vadzidzi | Ndinobva mac
Apple inopesana nekuraira kwaTrump kubvisa kuchengetedzwa kwevadzidzi ve transgender
Nezuro, Chitatu Kukadzi 22, raive zuva idzva rekukanganwa munhoroondo yeUnited States. Mutungamiri wako mutsva, Donald Trump, kukanzurwa kuburikidza nehurongwa hwevakuru zvakajairika yakambotenderwa neaimutangira, Barack Obama, uye zvinoenderana nezvinoitwa zvikoro zveruzhinji zveruzhinji zvinofanirwa kubvumidza vadzidzi vanoita transsexual kuti vapinde mudzimba dzekugezera nemakamuri ekuchinja zvinoenderana nehunhu hwavanonzwa kuzivikanwa nahwo.
Zvakare, sarudzo dzaDonald Trump yakasimudza mafungu ekushoropodza, kutsamwa uye gakava, kune izvo Apple yabatana nekukurumidza nekuti husiku chaihwo yakaratidza kupokana nesarudzo iyin, ndichisarudza "nharaunda isina rusarura uye rusarura" saka «Vadzidzi veTransgender vanofanirwa kurapwa sevakaenzana".
1 Donald Trump anobvisa kuchengetedzwa kwevadzidzi ve transgender
1.1 Trump inoita kuti magavhuna ake eRepublican afare
2 Apple inoti HAPANA kubvisa kudzivirirwa kwevadzidzi ve transgender
Donald Trump anobvisa kuchengetedzwa kwevadzidzi ve transgender
Donald VaTrump vadzoka kuzoita zvinhu zvavo uye, vachisimbisa fashoni iyi iyo yavanoda kwazvo kutonga nemutemo, nezuro vakabvisa dziviriro yainakidzwa nevadzidzi ve transgender muzvikoro zvehurumende zveruzhinji. Kubva pano, vadzidzi ava havachakwanise kuwana dzimba dzekugezera uye dzimba dzekuchinja dzechikadzi dzavanoziva, chimwe chinhu icho kusvika parizvino chavainakidzwa nekudzivirirwa zviri pamutemo nekutenda kune yakambotemerwa yakaziviswa naBarack Obama
Jeff Sessions, Attorney General weUnited States, ave ari mutariri wekuzivisa kuburikidza neshoko chirevo ichi chekumisa mutemo. Sekureva kwechirevo ichi, chokwadi chekuti vadzidzi ve transgender vanofarira kuchengetedzwa zviri pamutemo zvakakonzera kuvhiringidzika kwakanyanya munharaunda. Sarudzo nyowani iyi yakashandisawo chimiro ichi, ichiti danho rapfuura raObama harina kusanganisira "kuongororwa kwemutemo kwakaringana" nezve chiyero chekubatana pamwe nemasimba anopiwa nebumbiro remutemo pabazi reExecutive. Pamusoro pezvo, Sessions yakawedzera kuti izvozvi maparamende eCongress nehurumende pamwe nehurumende dzemunharaunda "vava pachinhanho chekutora marongero kana mitemo inoenderana nenyaya iyi."
Trump inoita kuti magavhuna ake eRepublican afare
Nyika dzinotongwa neRepublicans dzakapokana kuti Obama akapfuura simba rake muna Chivabvu wegore rapfuura paakasimudzira mutemo wekuti, kunyangwe waive usina hunhu hwemutemo, waisanganisira kubviswa kwemari yemubatanidzwa kune avo vekudzidzisa nzvimbo dzaisatendera vadzidzi ve transgender shandisa zvimbuzi uye dzimba dzekuchinja dzechikadzi dzavanoziva.
Iye zvino VaTrump vanofadzwa nevamwe vake vezvinamato, magavhuna eRepublican, pakati pavo, pasina kupokana, anodawo rutsigiro. Asi vatsoropodzi havana kutora nguva refu vachiuya uye Apple yaive imwe yemakambani ekutanga kuratidza vachipesana nesarudzo nyowani yaDonald Trump.
Apple inoti HAPANA kubvisa kudzivirirwa kwevadzidzi ve transgender
Kuteedzera kupokana kwako kwakasimba neanti-yekupinda munyika, Apple yaratidza kupikisa kwayo manheru anon Sarudzo ichangoburwa yaDonald Trump yekumira kudzivirira vadzidzi ve transgender muzvikoro zveruzhinji zveruzhinji.
Mune statement kuAxios, Apple yakataura izvozvo vanhu vese vanofanirwa kugona kubudirira munzvimbo isina rusarura kana kushorwa uye kuti kubva pano, transgender vadzidzi vanofanirwa kurapwa zvakaenzanahongu, saka haubvumirane nechisarudzo chero chipi chinotadzisa kodzero dzako kana kuchengetedzwa kwakon.
Apple inotenda kuti munhu wese anofanirwa mukana wekukura munzvimbo isina rusarura uye rusarura.
Isu tinotsigira kuyedza kusvika mukugamuchirwa kukuru, kwete zvishoma, uye isu tinotenda zvakasimba kuti vadzidzi ve transgender vanofanirwa kubatwa sevakaenzana. Hatibvumire kune chero kuyedza kudzora kana kumisa kodzero dzako uye dziviriro.
VaTrump, zvisinei, vanoti izvo zvikoro zveveruzhinji zvinofanirwa kuve nemvumo yekuzvisarudzira vega pazvinhu zvakaita seizvi.
Apple CEO Tim Cook haasati ataura nezvechisarudzo chazvino chakaitwa naTrump, asi kare kare akaratidzira kuve mudziviriri akasimba wekodzero dzeLBBT, uye pamusoro pekodzero dzose dzakaenzana dzevanhu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Apple inopesana nekuraira kwaTrump kubvisa kuchengetedzwa kwevadzidzi ve transgender
Safari Technology Preview 24 yave kuwanikwa kurodha pasi
Apple inogovera dzimbahwe rayo reCambridge kune yakasimba Siri kukura